China Massager Massage & Wireless Wireless Head Massager orinasa mpamokatra sy mpamatsy | Ubetter
Massager Remote & Wireless Wireless Head Massager
Laharana maodely: ST-703
Haben'ny vokatra: 22 × 6.6 × 5.4cm
Capacity bateria: 1200mAh
Ny mari-pana amin'ny tampon'ny contactor: 40 ~ 45 ℃
Fomba fiasa ： Vibration Auxiliary fanafanana Infrared
* Fiainana bateria tsy misy tariby sy lava: ny mpanety an-tanety tsy misy tariby Ubetter dia manana bateria lithium-ion azo havaozina izay afaka miasa 80 minitra isaky ny adidy feno. Maivana ny massager (2.6lbs fotsiny) ary azo entina. Ento miaraka aminao izy ity ary mankafy fanorana miala sasatra na aiza na aiza amin'ny fiaran-dalamby, fiaramanidina na fiara.
* Hafanana mampitony: ny mpanao lomotra gazoala lalina ao Ubetter dia manana endrika fanamafisana tsy voatery. Izy io dia hampihena ny hafanana mampitony ny vatana mba hanalefahana ny hozatra sy ny fatotra mihenjana. Fanamarihana: Aza asiana loha otra ary asehoy ny teboka mafana mena rehefa te hampiasa ny hafanana.
* Heads Percusshion roa, Ubetter tanana mitazona vatan-drongony dia misy loha roa mihetsika hatramin'ny pulsa 3200 isa-minitra mba hanaterana otrikaina ampongaina mahomby kokoa noho ny otra iray loha amin'ny faritra fanorana kendrena. 3 loha loha fanorana azo ovaina no manome otra mafy hanamaivanana ny havizanana sy fihenjanana ho an'ireo vondrona hozatra samihafa.
* Modère namboarina sy hamafisiny: ny vodin-tsoroka misy loha roa miaraka amin'ny hafanana dia manana hafainganam-pandeha miisa 3 miovaova ao anatin'ny maody 3, izay azo namboarina ho an'ny fanorana mampitony malefaka na fanorana mason-koditra lalina arak'izay ilainao. Afindra amin'ny vatan'ny vatanao ny teboka percussion ary ankafizo ny fialan-tsasatry ny vatana manontolo.
* Mora ampiasaina: fehezo tsotra izao ity massager percussion mafana ity amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra, mifanentana amin'ireo zokiolona hiasa sy mankafy fanorana be eo amin'ny sofa na fandriana, na oviana na aiza na aiza. Fetin'ny Fetin'ny Reny & Fanomezana ho an'ny Fetin'ny Reny ho an'i Neny na i Dada. Tonga miaraka amin'ny antoka 2 taona sy fiverenana maimaimpoana 30 andro hahazoana vola.
Sary → bobongolo → tsindrona → Famaranana ny tarehin-javatra → Fanontam-pirinty → Famatorana tariby → Fivoriana → Fanaraha-maso kalitao → Fonosana
Trano, birao, fitsangatsanganana, fialam-boly
* Samy mankamin'ny boaty miloko, miaraka amin'ny IFU
* Haben'ny boaty: 23x8x7cm,
* Haben'ny Ctn: 48x26x30cm
* Qty an'ny 20 '': 17928pcs
* Qty an'ny 40 '': 37176 pcs
* Qty an'ny 40HQ: 43584pcs
Fampahalalana momba ny fandefasana: ao anatin'ny 30-45 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko.
Teo aloha: Eye Massager fivarotana mafana am-bolo miaraka amin'ny masom-bolo azo entina mandrehitra hafanana
Manaraka: Fehikibo palma mafana an-tsaina
Dispenser ny savony tanana
Dispenser savony mahafatifaty
Dispenser Dual Auto Soap
Savony mihosin-drindrina vita amin'ny rindrina
Fivarotana ambongadiny fivarotana mafana amin'ny masom-bolo amin'ny maso ...
Fehikibo palma mafana an-tsaina
Vozona Massager 3D Matsilo elektrika maranitra ...
Salon fanamainana volo, Fanamainana volo fitsangatsanganana, Dispenser savony, Fanamainana volo ionic, Fanamainana volo, DC Motor fanamainana volo,